Xinhua Myanmar - အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ တူးမြောင်းထဲ ဘတ်စ်ကားထိုးကျမှုတွင် သေဆုံးသူ ၅၀ ဦးထိမြင့်တက်
အိန္ဒိယ ဘတ်စ်ကား ခရီးသည် သေဆုံး
အိန္ဒိယနိုင်ငံ Sidhi ခရိုင်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်က ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားတစ်စီး တူးမြောင်းထဲထိုးကျမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း အမျိုးသားသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(NDRF) မှ ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
အနည်းဆုံး ခရီးသည်နှစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားသည် Madhya Pradesh ပြည်နယ် မြို့တော် Bhopal မြို့မှ အရှေ့ဘက် ၄၉၃ ကီလိုမီတာအကွာ Sidhi ခရိုင်အတွင်းရှိ အနက် ၆ မီတာရှိသော Bansagar တူးမြောင်းထဲသို့ ထိုးကျနစ်မြုပ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်တွင် လူ ၇ ဦး အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း ၊ အချို့ခရီးသည်များသည် တူးမြောင်းရေစီးထဲမှ ဘေးလွတ်ရာသို့ ကြိုးပမ်းကူးခတ်ခဲ့သော်လည်း အနည်းစုကိုသာ ဒေသခံများက ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
NEW DELHI, Feb. 17 (Xinhua) -- A total of 50 bodies have been retrieved from the canal whereabus carrying around 60 passengers fell on Tuesday in India's Madhya Pradesh,asenior district administration official confirmed on Wednesday.
At least two persons are still said to be missing.
The ill-fated bus fell in the 6-meter-deep Bansagar canal in Sidhi district of the state, around 493 km east of state capital Bhopal.
Seven people survived the accident as some swam up to the banks on their own, whileafew others were rescued by locals. Enditem
Photo caption- Members of National Disaster Response Force (NDRF) conductarescue operation at the site ofabus accident near Patna village in Sidhi district, about 493 km east of Bhopal, the capital city of Madhya Pradesh, India, Feb. 16, 2021.
Previous Article ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် လာအိုနိုင်ငံက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ကုန်စည်တင်ပို့မှုမှ ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံရရှိခဲ့
Next Article အိန္ဒိယတွင် ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကား တူးမြောင်းထဲထိုးကျမှုဖြစ်ပွား၊ သေဆုံးသူ (၄၅)ဦး အထိ မြင့်တက်လာ